ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲနှင့် တရားနာပွဲများ (စင်္ကာပူ)
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲနှင့် တရားနာပွဲများ (စင်္ကာပူ)
မေလ ၂၄ရက်နေ့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲနှင့် တရားနာပွဲများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဂယာသုခါရာမကျောင်းမှ ကျင်းပမည့် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့နှင့် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
အချိန် - နံနက် (၉)နာရီမှ နေ့လည် (၂)နာရီထိ
နေရာ - Guest House, Japanese Garden, Chinese Garden Road
Clementi မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ကျင်းပမည့် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့နှင့် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
နေရာ - 23A, 25A Jalan Mas Puteh, Along West Coast Road, Singapore 128628 (Opposite Blk 701, near ESSO station)
Clementi MRT မှ Bus 78 / 285 ကိုစီးပြီး ၃ တိုင်မြောက်မှာ ဆင်း၍လမ်းဖြတ်ကူးပါ။
သစ္စာပါရမီကျောင်းမှ ကျင်းပမည့် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့နှင့် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
အချိန် - နေ့လည် (၁)နာရီမှ ညနေ (၆)နာရီထိ
နေရာ - Stone Boat, Chinese Garden (Near Chinese Garden MRT)
Toa Payoh မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ကျင်းပမည့် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့နှင့် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:32 PM
Labels: Events, Festivals, Invitation
Lin Latt Kyel Sin page is very absorbing page . I always look its .Also i have two web pages .Its www.shweeainyar.com & www.myanmajobs.com. So,you can see its ,because its now starting pages & new web pages . I hope your advice . Thank you . :)
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲနှင့် တရားနာပ...